Home > Ngwaahịa > Kwado Nchaji (Total 4 Ngwaahịa maka Kwado Nchaji)
Kwado Nchaji - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Kwado Nchaji manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Kwado Nchaji na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Kwado Nchaji na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Okpomoku ohuru n'èzí n'Ọnyịnya Ịnyịnya Na-agbapụta
Tag: Kwado Nchaji , Ebube Ebube , Ọkụ Egwurugwu Osimiri
Ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụrụ, oriọna na-ama ụlọikwuu, ọrụ aka rụọ ọrụ multi-function bulie oriọna. Na-akwado nkwado . Enwere ike ịgbaghara gị site na ike anyanwụ, nnukwu oghere nke anyanwụ, enweghị ìhè anyanwụ kpọmkwem, ọ bụrụhaala na a nwere ike ịba ụda...
Ekebere otutu anyanwụ na-akwado ikpo ọkụ ọkụ
Tag: Igwe Igwe Igwe Ikuku Ịgba Ọkụ USB , 0 , 5 W-100 MA Na-agụ Ọkụ , Igwe ọkụ na-enwu ọkụ na-enwu ọkụ
Ụdị ọkụ ọkụ a na-ejikọta ya na USB na-ekpuchi oriọna ikuku na-enweghị ike bụ obere ma dị mfe ibu, ụdị ejiji, nhazi ihu-nche, ìhè ọkụ na-eme ka LED, ezigbo ìhè ìgwè, dị mfe iji, ọ dịghị mkpa iji dochie batrị ahụ. Isi oriọna ahụ nwere ike ịgagharị...
Kwado Nchaji akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Kwado Nchaji ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Kwado Nchaji kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Kwado Nchaji wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.